Xulka Jarmalka Oo Garoonka Isaga Baxay Kulankii Hondurus – Garsoore Sports
Xulka Jarmalka Oo…
Xulka Jarmalka Oo Garoonka Isaga Baxay Kulankii Hondurus
Kooxda kubadda-cagta ee Olombikada Jarmalka ayaa garoonka ka baxday iyadoo shan daqiiqo keliya ay ka harsan tahay ciyaarta kaddib markii aflagaado la sheegay in loo geystay daafacooda 23 jirka ah.
Ciyaartii saaxiibtinimo ee kooxda Olombikada Jarmalka ay la yeelatay Honduras ayaa si lama filaan ah ku dhammaatay Sabtidii markii ay ciyaartooydu garoonka ka baxeen sababo la xiriira xadgudub cunsuriyad ah oo loo geestay Jordan Torunarigha.
Kooxda macalin Stefan Kuntz waxay wajahday waddanka Bartamaha Ameerika kasoo jeeda iyadoo loo diyaar garoobayo Olombikada 2020, oo bilaabmi doona isbuuca dambe.
Cayaartu waxay ahayd 1-1 kahor inta inta aan dhacdada cunsuriyadda sababin in garoonka ay ka baxaan xulka Jarmalka.
Barta Twitter-ka ee kooxda Kubadda Cagta Ciyaaraha Olambikada ee Jarmalka ayaa lagu sheegay in ciyaartoydu ay go’aansadeen inay baxaan maxaa yeelay daafac Torunarigha ayaa loo jiheeyay aflagaado cunsuriyad ah.
“Ciyaarta waxay noqotay in la joojiyaa shan daqiiqo kahor dhammaadka markaas oo natiijada ay aheyd 1-1. Kaddib markii ciyaartoygeena Jordan Torunarigha lagu aflagaadeeyay cunsuriyad, kooxda Jarmalka ayaa garoonka si wada jir ah uga baxday,” ayaa lagu yiri warbixin kooban.
DFB ayaa u xaqiijisay Goal iyo SPOX in aflagaadada la sheegay uu sameeyay mid ka mid ah ciyaartoyda Honduras.
Ma jirin wax daawadayaal ah oo ciyaarta u daawanayay, maadaama uu ahaa kulan albaabadu u xiran yihiin oo lagu ciyaarayay magaalada Wakayama ee dalka Japan.
Isagoo hadlayay ciyaarta ka dib, Kuntz oo ah tababaraha xulka ayaa faallo ka bixiyay dhacdada wuxuuna yiri “Markii mid ka mid ah ciyaartoydeena la cunsuriyeeyo, inaan sii cayaarno ma’ahan dookh aan dooraneyno.”
Ryan Giggs Oo Loo Heysto Inuu Iyadoo Qaawan Saaxiibtii Ka Laaday Qolka Hotelkiisa